यस कारण टोक्नु हुँदैन नङ ? « Himal Post | Online News Revolution
यस कारण टोक्नु हुँदैन नङ ?
प्रकाशित मिति : २०७४, २७ श्रावण १७:१६
सामान्यतया सबै खाले रोगव्याधबाट जोगिन चिकित्सकदेखि घरपरिवारका ठूलाबडाले हात सफा राख्ने सल्लाह दिन्छन्। सबै भन्छन्, ‘हात सफा राख। दिसा–पिसाब गरेपछि साबुनले हात धोऊ, खाना खानुअघि हात धोऊ।’
हात धुँदा नङ र औंलाको काप राम्ररी सफा हुँदैन। साथै हात धोएपछि पनि नङ र काप धेरै बेरसम्म सुक्दैन। सुख्खा नहुने र ओसिलो (भिजेको) ठाउँमा ब्याक्टेरियाको अत्यन्त छिटो वृद्धि हुन्छ।
धेरै मानिसको नङ टोक्ने बानी हुन्छ। नङ कीटाणूको भण्डार भन्ने थाहा पाइसकेपछि अझै नङ टोक्नु हुन्छ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिपत्रले देशभर त्रास
काठमाडौं- कोभिड-१९ को तेस्रो लहर आउने जनाउँदै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सातै प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई